အကောင်းဆုံးပရိုတင်းအမှုန့် (၅) မျိုး - Shangke Chemical
အကောင်းဆုံးပရိုတင်းအမျိုးအစား ၅ ခု
ဧပြီလ 18, 2020
1. အာလဖ -Lactalbumin
၃။ Lactoperoxidase (LP)
၅။ Lactoferrin (LF)
ပရိုတိန်းကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးကြွက်သား၊ အရိုး၊ အရေပြား၊ ဆံပင်နှင့်အခြားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်ရှူးများတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်ဓာတုဓာတ်ပြုမှုများနှင့်သင်၏သွေးထဲတွင်အောက်စီဂျင်သယ်ဆောင်သည့်ဟီမိုဂလိုဗင်များစွာကိုစွမ်းအားရှိသောအင်ဇိုင်းများပါဝင်သည်။ အနည်းဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကွဲပြားခြားနားသောပရိုတိန်းသည်သင့်အားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင့်အားထိုအတိုင်းထားစေပါ။
ပရိုတင်းသည်စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးသင့်စိတ်ခံစားချက်နှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိတစ်သျှူးများ၊ ဆဲလ်များနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအရေးပါသောအာဟာရဖြစ်သည်။
ပရိုတိန်းအမှုန့်များသည်နို့၊ ကြက်ဥ၊ ဆန်၊ ပဲစသည့်တိရိစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်အပင်များမှအစားအစာများမှပရိုတင်းဓာတ်စုစည်းထားသောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ ပရိုတိန်းအမှုန့်များသည်အမျိုးမျိုးသောရင်းမြစ်များမှလာပြီးဖော်မြူလာများစွာတွင်ရရှိနိုင်သည်။ လူများသည်ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးပွားစေရန်၊ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းမှုတိုးတက်စေရန်နှင့်သူတို့၏ပရိုတိန်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်သူတို့ကိုအသုံးပြုသည်.
ဒီနေရာမှာပရိုတိန်းအမှုန့်အမျိုးမျိုးရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ တခါတလေဖိစီးမှုခံစားရတယ်။ ဒီမှာပရိုတင်းအမှုန့် (၅) ခုအကောင်းဆုံးရင်းမြစ်ကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
Alpha-lactalbumin အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ (BCAA) အားလုံးတွင်သဘာဝအရမြင့်မားသောပါဝင်မှုပါဝင်သောသဘာဝ whey ပရိုတိန်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထူးခြားသောပရိုတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ alpha-lactalbumin တွင်အသိသာဆုံးအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည် BCAAs နှင့်အတူ tryptophan နှင့် cysteine ​​တို့ဖြစ်သည်။ leucine, isoleucine နှင့် valine ။
Beta-Lactoglobulin (ß-lactoglobulin, BLG) သည်မွေးမြူရေးနို့မှုန့်၏အဓိကသန္ဓေသားပရိုတိန်းဖြစ်ပြီးအခြားတိရိစ္ဆာန်များ၏နို့တွင်ပါသော်လည်းလူ့နို့တွင်မတွေ့ရပါ။ Beta-lactoglobulin lipocalin proteine ​​ဖြစ်ပြီး hydrophobic molecules များစွာကိုစည်းနှောင်စေပြီးသူတို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာအခန်းကဏ္suggestကိုအကြံပြုသည်။ β-lactoglobulin ကိုလည်း siderophores မှတဆင့်သံကိုခညျြနှောငျနိုငျကွောငျးဖျောပွထားသဖွငျ့ရောဂါပိုးနှိမ်နင်းရေးကိုနှိမ်နင်းရာတွင်ပါဝင်နိုင်သည် β-Lactoglobulin သည်ဤပရိုတိန်းကိုအစားအစာနှင့်ဇီဝဓာတုဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက်စွယ်စုံပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်စေသည့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုတင်ပြသည်။
Lactoperoxidase သည်နို့တိုက်သတ္တဝါအများစု၏နို့နှင့်မျက်ရည်နှင့်တံတွေးကဲ့သို့သောအခြားခန္ဓာကိုယ်အရည်များတွင်တွေ့ရသောသဘာဝအင်ဇိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်၏ရှေ့မှောက်တွင် hypothiocyanous အက်ဆစ်သို့ thiocyanate အိုင်းယွန်းများကိုဓာတ်တိုးစေပြီးဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အဆိုပါအက်ဆစ်သည်နို့တွင် dissociates နှင့် hypothiocyanate အိုင်းယွန်းဘက်တီးရီးယား၏ဇီဝဖြစ်စဉ်အင်ဇိုင်းတွေ inactivate မှ suphydryl အုပ်စုများနှင့်အတူတုံ့ပြန်။ ၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားပိုးများမပွားများစေရန်နှင့်နို့မှုန့်များ၏လက်ခံနိုင်သောအရည်အသွေးကိုတိုးချဲ့စေသည်။
Lactoperoxidase ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးနှင့် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဟုလူသိများသည်။ ဂျာနယ်အသုံးချအဏုဇီဝဗေဒဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ၎င်းသည်အရေပြားအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အပြင်ဝက်ခြံဖြစ်စေသောဘက်တီးရီးယားများကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ Lactoperoxidase သည်အလှကုန်များနှင့်အခြားအလှအပထုတ်ကုန်များ၌တဆေးများ၊ မှိုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများမကြီးထွားလာစေရန်တားဆီးရာတွင်အသုံးပြုသောပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ရာတွင်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Lactoperoxidase သည်ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုရှိသော glycoprotein ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဖော်မြူလာတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းသက်တမ်းကုန်အောင်တိုးတက်စေရန်တည်ငြိမ်စေသောအရာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
Immunoglobulin G (IgG) ၎င်းသည်သွေးထဲ၌အပေါများဆုံး antibody isotype (ပလာစမာ) ဖြစ်ပြီးလူ့ immunoglobulins (antibodies) ၏ ၇၀ မှ ၇၅% အထိရှိသည်။ IgG သည်အန္တရာယ်ရှိသောအရာ ၀ တ္ထုများကို detoxifies နှင့် leukocytes နှင့် macrophages တို့မှ antigen-antibody complexes များအားအသိအမှတ်ပြုရာတွင်အရေးကြီးသည်။ IgG သည်သန္ဓေသားအားအချင်းချင်းမှတစ်ဆင့်ကူးပြောင်းပြီး ၄ င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခံအားစနစ်လည်ပတ်သည်အထိကလေးကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Lactoferrin ဆိုသည်မှာလူနှင့်နွားများမှနို့ရည်တွင်သဘာဝတွေ့ရှိရသောပရိုတင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုခန္ဓာကိုယ်ရှိအခြားအရည်များတွင်ဖြစ်သောတံတွေး၊ မျက်ရည်၊ ချွဲနှင့်အူသိမ်များတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ Lactoferrin ပမာဏကို colostrum တွင်အများဆုံးတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည်ကလေးမွေးပြီးနောက်ပထမဆုံးနို့ရည်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ Lactoferrin ၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သံနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ကူးစက်ရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်လည်းကူညီသည်။
Lactoferrin မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသောကလေးငယ်များအတွက်ကိုယ်ခံအားစနစ်တိုးမြှင့်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်လူ့မွေးကင်းစများကိုပantibိဇီဝဆေးနှင့်ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေသည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ LF သည်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်မှုမြင့်မားသောကြောင့် mucosal level တွင်ခုခံကာကွယ်ရန်တာဝန်ရှိသည့်ကိုယ်ခံအားစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
Lactoferrin နှင့် Lactoferrin ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုကျယ်ပြန့်စွာလေ့လာခဲ့သည်။ လူအချို့သည် antioxidant နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေသည့် Lactoferrin ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသောက်သုံးကြသည်။
စက်မှုစိုက်ပျိုးရေးတွင် lactoferrin အမှုန့်ကိုအသားထုတ်သည့်အခါဘက်တီးရီးယားများကိုသတ်ပစ်သည်။
Markus ကို C, Olivier B, Panhuysen, G, et al ။ bovine ပရိုတိန်း alpha-lactalbumin သည် tryptophan ၏ပလာစမာအချိုးအစားကိုအခြားကြီးမားသောကြားနေအမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်တိုးပွားစေပြီးအားနည်းချက်ရှိသည့်လူများတွင် ဦး နှောက် serotonin ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး cortisol အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ နံနက် J ကို Clin Nutr 2000; 71 (6): 1536-1544 ။
beta-lactoglobulin ၏ retinol နှင့် fatty acids နှင့်ဤပရိုတိန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု:areview.Pérez MD et al ။ J ကိုနို့ထွက် Sci ။ (1995)
polystyrene nanoparticles ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ beta ကို -lactoglobulin ၏တွေ့ရှိနေရသည်: စမ်းသပ်နှင့်ကွန်ပျူတာ approaches.Miriani M et al ။ ပရိုတိန်း။ (၂၀၁၄)
emulsion- ခညျြနှောငျ bovine beta ကို - lactoglobulin အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများသည်၎င်း၏ proteolysis နှင့် immunoreactivity.Marengo M et al အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Biochim Biophys Acta ။ (၂၀၁၆)
dual- oxidases နှင့် lactoperoxidase.Sarr: D et al ၏မွှားအပြုအမူ။ J ကို Microbiol ။ ငွေအ nanoparticles အပေါ် (2018) Lactoperoxidase immobilization ယင်း၏မွှား Activity.Sheikh IA et al ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဂျေနို့ထွက် Res ။ (၂၀၁၈)
Lactoperoxidase သည်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်သည့်နို့မှုန့်ပရိုတင်းဖြစ်သည်။ ရင်သားကင်ဆာ - ကင်ဆာရောဂါ Heterocyclic Amines ၏အလားအလာရှိသောလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ရင်သားကင်ဆာ - Sheikh IA et al ။ Anticancer Res ။ (၂၀၁၇)
Lactoferrin ပါဝင်သော immunocomplex သည်အကျိတ်နှင့်ဆက်စပ်သော macrophages များကို M1 phenotype သို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည့်သက်ရောက်မှုများကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ Dong H, Yang Y, Gao C, Sun H, Wang H, Hong C, Wang J, Gong F, Gao XJ Immunother Cancer ။ ၂၀၂၀ မတ်လ
osteoblast ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် differentiation.Shi P ကို, ဝါသနာရှင်က F, Chen က H ကို, Xu Z ကို, Cheng S ကို, Lu W, Du MJ နို့ထွက်သိပ္ပံမှတဆင့် osteogenesis သွေးဆောင်တစ် ဦး က bovine lactoferrin- ဆင်းသက်လာ peptide ။ 2020 မတ် ၁၇ ရက်
Lactoferrin ၏ကင်ဆာဆန့်ကျင်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိများ - လုံခြုံမှု၊ ရွေးချယ်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သောလုပ်ဆောင်ချက်။ ကူတွန်န၊ ရိုဆာ L၊ Ianiro ဂျီ၊ Lepanto MS, Bonaccorsi di Patti MC, Valenti P, Musci G.Biomolecules ။ 2020 မတ် ၁၅ ရက်
မွေးကင်းစ၌ Lactoferrin ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု: ရောဂါကူးစက်မှုနှင့် Gut Microbiome.Embleton ND, Berrington JE.Nestle Nutr Inst Workshop Ser အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ 2020 မတ် ၁၁ ရက်